Tonga ao amin'ny iOS sy Android ny saga Battlefield amin'ny 2022 | Vaovao IPhone
Taorian'ny roa taona niandrasana, andro vitsivitsy lasa izay, ireo tovolahy avy ao amin'ny Respawn dia nanambara ny tondrozotra hanangana ny battle royale Apex Legends amin'ny finday. Nefa toa izany tsy izy irery no lohateny hita eo ambanin'ny elo Elektronika izay hipetraka amin'ny finday ihany koa.
Nanambara i EA fa amin'ny 2022 dia hanomboka izy io Battlefield ho an'ny finday. Ity mpitifitra olona voalohany ity dia hanatevin-daharana ny Apex Legends sy ny Call of Duty Mobile, PUBG ary raha toa ka miraikitra amin'ny Epic ny Fortnite, na dia eo amin'ny olona fahatelo aza io dia azontsika atao koa ny mandinika azy ao anaty kitapo iray ihany.
EA dia nanambara ity famotsorana ho avy ity amin'ny alàlan'ny fanambarana izay anambarany fa ny developer izay miandraikitra ny fivezivezena ny lalao dia Industrial Toys.
Oskar Gabrielson, CEO an'ny DICE dia nilaza fa:
Aza diso: lalao mahaleo tena izy io. Lalao hafa tanteraka amin'ilay noforoninay ho an'ny console sy PC, natao manokana ho an'ny sehatra finday. Izy io dia noforonin'i IToys hatrany am-boalohany hanaovana a ady azo lalaovina na aiza na aiza ary afaka manantena traikefa mifototra amin'ny fahaizana miavaka ianao. Ity lalao finday ity dia miditra amin'ny fotoam-pitsapana amin'ny fanombohana amin'ny taona ho avy, koa manantena izahay fa hanana antsipiriany bebe kokoa atsy ho atsy.
Toa izany amin'ny Electronics Arts tsy te hitondra ny traikefa filalaovana amin'ny fitaovana finday izy ireo manaraka làlana hafa. Ny PUBG sy Fortnite dia mamela anao hilalao sarintany mitovy ary manolotra lalao mitovy amin'ny fampiharana findainy, tsy toy ny Call of Duty: Mobile izay tsy misy ifandraisany amin'ilay kinova ho an'ny PC sy ny consoles ny sarintany royale.
Andro vitsy lasa izay DICE dia nanambara ny fanombohana ny Battlefield 6 amin'ny faran'ity taona ity. Betsaka ny tsaho milaza fa ny fiakaran'ny hatsarana sy ny mekanika tadiavin'izy ireo amin'ity titre vaovao ity angamba avelao ny PlayStation 4 sy ny Xbox One, na dia tsy misy voamarina aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Ho tonga amin'ny iOS sy Android amin'ny 2022 ny saga Battlefield
Ny AirTag dia tsy natao hanarahana ankizy na biby fiompy araka ny filazan'ny Apple